YAA KA DAMBEEYA DILALKA QORSHEYSAN EE SHAQAALAHA SHIRKADDA HORMUUD!!!. | gobolada.com
YAA KA DAMBEEYA DILALKA QORSHEYSAN EE SHAQAALAHA SHIRKADDA HORMUUD!!!.
Nov 17, 2018 - jawaab
Inta aanan guda galin qormadeyda waxaan rabaa in aan si kooban uga hadlo shirkadda Isgaarsiinta Hormuud oo muddooyinkii dambe shaqaalaheeda iyo madaxdeeduba wajahayeen dilal qorsheysan iyo hanjabaadyo taasoo xaalad cabsi daran ku abuurtay isla markaana qeybaha kala duwan bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba ay hadal hayaan.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom (HORTEL) waa shirkad si gaar ah loo leeyahay (PRIVAT), taasoo dhidibada loo taagay Bishii April sanadii 2002-dii, iyadoo xarunteeda dhexe ay tahay Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
In ka badan 650 qof oo muwaadiniin Soomaali ah ayaa wadaag ku ah shirkada Hormuud, iyadoo shirkadu ay bixiso adeegyada kala ah Taleefoonada Fiilada, Mobile-ka gacanta, Internet iyo adeegyo kale oo aas-aasi ah.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud waxaa ka shaqeeya in ku dhow 1,4-Milyan oo shaqaale ah kuwaasoo ka howlgala guud ahaan xarumaha shirkadu ku leedahay gudaha dalka Soomaaliya, guud ahaan shaqaalahaasina waxay si toos ah bil waliba u helaan mushaaraadka shirkadda ay bixiso, waana loo mahdiyey.
Aas-aasayaasha shirkadda waa laba nin sida aan xogta ku helay kuwaa oo lagu kala magacaabo Eng Axmed Sheekh Cali Samatar oo haatan ku nool dalka Igiriiska gaar ahaan magaalada London iyo AUN Ibraahim Sheekh Maxamed (Ibraahim Afgooye), xiligii la aas-aasayay shirkadda waxaa dhinac taagnaa Axmed Nuur Cali Jimcaale oo hadda ah xubnaha ugu sareeya shirkada.
Hormuud Telcom waxa ay ka shaqeysaa magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin dhaca koonfurta, bariga iyo bartamaha dalka Soomaaliya, mudada ay jirtana waa lagu aflaxay.
Haddaba murti Soomaaliyeed ayaa oranaysa “Hadduu nimaan talin jirin taliyo, nimaan tagi rabin ayaa taga” mid kale ayaa Iyana dhahaysa “Nimaan qaybin jirin hadduu qaybiyo, nimaan qadi jirin ayaa qada”.
Haddaba sida magaca qormada ku xusan waxaan si kooban kaga hadli doonnaa xaggee uga yimid shirkadda Isgaarsiinta Hormuud dilalka lagu hayo..? Yaase ka dambeeya..? Ujeeddo noocee ah ayaa laga leeyahay beegsiga qaarajinta shaqaalaha iyo mas’uuliyiinta Shirkaddaas.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la joogteystay dilka shaqaalaha shirkadda Hormuud gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xarumaheeda Magaalada Muqdisho, todobaadyadii aynu soo dhaafnay kooxo wajiyada dabooshay iyo kuwo uu u furan yahay ayaa waxay dileen 8-ka mid ah shaqaalaha shirkadda Hormuud xarumaheeda kala duwan ee magaalada Muqdisho, xubnaha la dilayna waxay ku heeb yihiin Axmed Nuur Cali Jimcaale beel ahaana waa Duduble qaar kalena waxay heleen fariimo hanjabaadyo loogu sheegay in la dilayo, iyadoo sababo la xirriira arrimo badan oo is biirsaday awgeed loo beegsanayo.
Shakiga koowaad kooxda cusub ee daacishta Soomaaliya ayaa loo malaynayaa inay ka dambeeyaan dilalka lagu hayo shaqaalaha shirkadda Isgaarsiinta Hormuud, iyadoo ujeedka kooxdaasina lagu sheegay mid ay dhaqaale kaga doonayaan inay ka helaan.
Hormuud waxay si dadban iyo mid toosaba ku bixisaa lacagaha sakawaadka Al-shabaab ay ka qaadaan guud ahaan gacansatada Soomaaliyeed, waana mid ay ku bad-baadsanayso jiritaankeeda maadaama dalka aanu ka jirin awood dowladd oo si dhab ah u sugi karta amaanka guud ee dalka waana sababta shirkadda u bixiso lacagahaasi.
Sidoo kale Hormuud waxay bixisaa Canshuurta Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka qaado ganacsatada, balse canshuurtaasi ay bixiso badalkeeda dowladda kama hesho sugida amaankooda iyo adeegyadii kale shirkaddu ay uga baahneed dhinaca dowladda.
Daacishta Cusub ee Soomaaliya oo qaarkood asal ahaan ka soo baxay kooxda Al-shabaab ayaa la tilmaamay inay dhaqaale fara badan weydiisteen maamulka sare ee shirkadda hase’ahaatee miisaaniyadii ay dalbadeen mid ka yar loo qoondeeyey taasoo u cuntami wayday, waana sababta keeneysa inay dilaan shaqaalaha si miisaaniyada ay rabaan loogu ogolaado.
Marka aad eegto dilalka loo geysanaayo shaqaalaha shirkadda Hormuud ayaa waxaa kuu caddaaneysa in ay tahay mu’aamaro qoto dheer oo siyaasadaysan dadna ay ka danbeeyaan waana halis haddii aan laga hortagin dilkaan joogtada ah.
Dhinaca kale sida ay ugu guuldareysteen dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya amaanka caasimada, siyaasada maamul goboleedyada iyo xirriirka shakiga badan dhaliyey ee iskaashiga Midowga dowladdaha Ethiopia, Eritrea iyo Somalia waxaa soo baxay beegsiga tooska ah ee shaqaalaha Hormuud (Hadeysan ayaguba ka dambeyn).
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ku caan baxay cid kasta oo iyaga aan hoos imaan in ay ka taqlusaan oo ay gebi ahaanba burburiyaan iyo dulqaad la’aan siyaasadeed waa sida ay qabaan dad badani.
Kullan dowladda ay la qaadatay maamulka sare shirkadda Hormuud bartamaha sanadkii tagey ayay kaga dalbadeen in ay shirkadda joojiso dhaqaalaha ay ku bixiso Al-shabaab, hase’yeeshee gaashaanka ayay u daruureen, waxayna si cad dowladda ugu sheegeen suurtagal la’aanta arrintaasi maadaama amaankooda halis uu galaayo dowladdana awood u lahayn xaqiijinta amaanka shirkadda iyo shaqaalaheeda.
Waxaa inagu maqaalo ah Dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud inuu sameeyey Ciidan gaar ah oo dares wata oo shirkadda Hormuud leedahay, balse ciidamadaasi waxaa kala diray dowladda Farmaajo iyagoo lagu amray in ay ka mid noqdaan ciidamada Booliska Soomaaliya taasoo aanan macquul ahayn in shaqaale shirkaddeed oo aan dowli ahayn ilaaladeeda la dowladeeyo iyadoo la eegayo xaalada amaan ee dalka iyo dhinacyada isku haya hardanka dagaal.
Haddii aan dilalkaan si kale u fiirino, aragtiyo kala duwan ayay Soomaalidu ku sheegtay dadka ka dambeeya dilalka noocaan ah, in kastoo aysan fududeen in si sahlan lagu ogaado, haddane waxay u muuqataa nashqadaha Itoobiya si loo wiiqo awooda dhaqaale iyo jiritaan ee shirkadda Isgaarsiinta Hormuud oo dhaqaalaha dalka gacanteeda ku jiro.
UJEEDDADA LAGA LEEYAHAY.
Soomaalidu waxay tiraahdaa “Aamusnaan waa raali”, ujeedka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay dilalka shaqaalaha Hormuud waxa weeye ayagoo iska dhaadhiciyey amaba aaminsan in cida maal galisa oo dhaqaalaha ugu badan Al-shabaab ay tahay shirkadda Hormuud, haddaba ayagoo taas ka duulaya isla markaana copy-garaynaya nashqada Itoobiya ayay beegsiga lagu hayo shaqaalaha Hormuud bilowdeen.
Haddii ay kordhaan dilalka shaqaalaha waxaa cuuryaamaya howlaha shirkadda, taasoo la rabo in guud ahaan dhaqaalaha shirkadda lagu cuuryaamiyo si baaba’ dhaqaale loogu geysto.
Magaalada Muqdisho waxaa hore looga bartay dilal loo geysto shaqaalaha dowladda, dadka shacabka ah, shaqaalaha Hay’adaha kale ee Ajaanibta iyo Suxufiyiinta, hase’yeeshee waxaa amakaag shacabka Soomaaliyeed ku noqotay ujeedka iyo sababta beegsiga loogu haayo shaqaalaha shirkadda Hormuud.
Sida ay ilo aan ku kalsoon nahay inoo sheegeen, arrintaan ayaa lala xiriirin karaa tartan ganacsi, iyadoo dilalkaan lagu macneen karo dagaal ku salaysan ganacsi.
Beegsiga shaqaalaha shirkadda Hormuud haddii uu sidan ku sii socdo waxaa dhici karta inuu isku badalo dagaal beeleed ka holca gudaha Magaalada Muqdisho, saameena ku yeesha gobolada kale ee dalka.
Sidoo kale waxaa dhici karta maadaama hubka uu wali ku jiro gacanta beelaha, in la weeraro shirkado kale oo tartan iyo dagaal kula jira Hormuud.
Amni xumida ka jirta magaalada Muqdisho waxay gaartay heer aan horay u dhicin, dad badan waxay aamisan yihiin in dilalka iyo weerarada dhacaya dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ku lug leedahay, maxaa yeelay sida ay u dhacayaan marka aad eegto iyo goobaha ay ka dhacayaan waxay ku galinayaan dareen aad u xoog badan, haddana waxaa lagaa dhaadhicin kooxaha argagixisada ayaa fulisay sida uu maalin ka hor cadeeyey shaki Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ka muujiyey weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday Hotel Saxafi ee Magaalada Muqdisho.
Ugu danbeyntii dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waa in ay ogaataa in indhaha Caalamka iyo kuwa Soomaalidaba ay ku soo jeedaan oo la eegi doono halka ay ku dambeyn doonto dilalka joogtada ee lagu haayo shaqaalaha Hormuud Telcom iyo xubnaha fikir ahaan ka horjeeda siyaasada hogaanka dalka.
W/Diyaariyey:- Bile Maxamed Cabdi (Bile Baastey).